जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको भविश्य झनै खतरामा पर्ने संकेत, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको भविश्य झनै खतरामा पर्ने संकेत
यतिबेला अमेरिकामा जनसम्पर्क समितिमा आबद्ध रहेका साथीहरुको सबैको चासो र चिन्ता भनेको जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको भविश्य के होला भन्ने रहेको देखिएको छ। महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको महान् उद्धेश्य लिएर शुरु गरेको भए पनि यस संस्था यसको मर्म बाहिर गएर अमेरिकामा भने स्थापनादेखि नै यो संस्था विवादमा रुमलिएको छ । स्थापना हुँदादेखि नै विवादमा रहेको जनसम्पर्क समिति सदैव बिबादमा रहँदा अमेरिकामा रहेका जनसम्पर्क समितिमा आवद्ध साथीहरुलाई संस्थाप्रति नै बितृष्णा पैदा गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। जनसम्पर्क भन्दा बाहिरका अन्य व्यक्तिहरुलाई जनसम्पर्क भनेकै आपसमा लडाई गरेर बस्ने संस्था भन्ने जस्तो नकारात्मक प्रचार गर्न पाउने मनोरञ्जनको माध्यम बनेको छ।
जनसम्पर्क समिति अमेरिकाबासी नेपालीहरुको सबैभन्दा धेरै च्याप्टर भएको सक्रिय संस्था हो।यस संस्थालाई हामीले लामो समयसम्म निक्रिय पारेर बस्यौ भने यसको गरिमा घट्ने खतरा हुनेछ। यतिबेला हामीले हाम्रो संस्थालाई मजबुत बनाएर यंहाका अन्य संस्था भन्दा उत्कृष्ट बनाउनका साथै नेपालको मातृ पार्टी समक्ष पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्नुछ। हामी पनि नमिल्ने अनि हाम्रो मातृपार्टी मिल्ने, आपसमा गुट बन्दीमा लाग्यो भन्ने तर्क गर्नु बेकारको कुरा हुन्छ। हामीले परिवर्तन चाहाने भने परिवर्तन आफैबाट शुरु गर्नु आवश्यक छ।
त्याग र आपसी छलफल बिना कुनै पनि संस्थाको हित हुदैन। हामीले कसैले पनि त्याग गर्न पनि नखोज्ने अनि मेरो गोरुको बार्है टक्का भने जस्तो सबै आफ्नो अडानमा रहेर अब जनसम्पर्क समितिको भविश्य झनै खतरामा पर्नेछ। जनसम्पर्क समिति भनेको मातृभूमिमा रहेको हाम्रो माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था हो।
नेपाली काँग्रेसले अहिलेको चुनावमा नराम्रो हार ब्यहोर्नु पर्दा हामी सबै जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरुले समेत हारेका छौं। अहिले जसरी पार्टी केन्द्रमा चुनावदेखि सगंठनको बारेमा समिक्षाको बहस तातेको छ र यहाँ पनि हामीले यो सगठनको वर्तमान दुर्दशा, तीन वर्षसम्म भए गरेका क्रियाकलाप र यसको भविष्यका बारेमा बहस गर्न उपयुक्त समय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यतिबेला हामीले हाम्रो काम, हिजो के भएको थियो भन्दा पनि बिगतलाई राम्ररी समिक्षा गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने, सगठनलार्इ कसरी मजबूत बनाउने बिषय महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्दछ।
स्थापनादेखि देखिदै आएको विवाद टेक्सासमा भएको ऐतिहासिक अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भए पछि सदाका लागि अन्त्य होला भन्ने सबैमा बिश्वास थियो । जसरी टेक्सासमा हामीले लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई आत्मसात गरेर चुनावबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सफल भयौं, त्यो उत्साह र बिश्वासलाई हामी र हाम्रो नेतृत्वले कायम राख्न र आम कांग्रेसका भावनालाइ सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर बिरोध आउनुलाइ बिरोधका लागि बिरोध हो भन्दा पनि हामीले के साच्चै त्यों भावना अनुरूप काम गर्न सकेनौ की भनेर समीक्षा र आत्मसाथ गर्न न सक्नु आफैमा दुःखद कुरा हो।
बिष्णु सुबेदीको नेतृत्व पालामा भएका केही महत्वपूर्ण कामहरु र उहाँको नेतृत्वमा भएका प्रयासलाई हामीले स्वामित्व ग्रहण नगरी अगाडि बढ्न खोज्नु पनि मुर्खता थियो। त्यसैगरी अधिवेशनबाट बनेको आनन्द बिष्ट नेतृत्वको समितिलाई पनि शुरुदेखि नै सहज रुपमा काम गर्ने दिएर समस्याको समाधान निकाल्नतर्फ भन्दा पनि हाम्रा केही साथीहरु नेतृत्वलाई फेल गराउने तर्फ लागेको तितो अनुभव पनि सबैले आत्मसात् गर्नुपर्दछ। तर यही कुराको जरोमा टेकेर आफूले गर्न नसकेका राम्रा कामको लागि अरू माथी दोष थोपरेर पानी माथीको ओभानो बन्न खोज्नु नै सस्थाको अधोगति हुनु हो।
नयाँ समिति बनेपछि नेपालमा गएको महाभूकम्पका बेला उठेको रकम र नेपालमा गरेको सहयोग पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो। यद्यपी त्यहि महाभुकम्पले हाम्रो संस्थामा महाभूकम्पको पैसा हिनामिना रूपी महाबिपत्ति ल्याएको तितो अनुभव छ। यही बिपतीले हाम्रो संस्थालार्इ तहस नहस पारेको छ। नेपालमा भएका बिभिन्न चरणका निर्वाचनमा जनसम्पर्क समितिका बिभिन्न नेतृत्वहरू गाउँ गाउँमा पुगेर गरेको मेहनत र उहाँहरूको मेहनतको हामीले उच्च मूल्याँकन गरिनु जरूरी छ।
अहिले हामीसंग निर्बाचित समितिको म्याद पुरा भइसको छ। पार्टीले तत्काल कुनै काम नगर्नु भनेर पत्र गसिकेको अवस्था र निर्बाचित अध्यक्ष आनन्द बिष्ट पनि आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा पदोन्नती भएको कारणले आम सदस्यहरु बिच अबको निकास के भन्ने बिषयले थप चर्चा पाउनु स्वभाविक हो।
अब पनि हामीले यो संस्थालार्इ संस्थागत गर्ने त्यस समयमा देखिएका खराब कुराहरुलाई सुधारेर नयाँ तरिकाले अगाडि जान सकेनौं भने जनसम्पर्क समिति अमेरिका अझै कमजोर, लथालिग र बिस्थापनको सघारमा पुग्ने निश्चित छ । यतिबेला धेरै साथीहरु पार्टीले के पत्र पठाउला वा केन्द्रका कोहि नेता आउँदा के बोल्लान् भनेर आशा गरी प्रतिक्षा गरेको देखिन्छ। आज अमेरिकामा यो संगठन लथालिग छ। सबै च्यापटरहरूको नेत्रित्व बिहिन छन्। तीन वर्षमा हामीले अघिबेशन गरेर नयॉ नेत्रृत्वलार्इ समिति सुम्पिन न सक्नु बर्तमान समितिको सबैभन्दा ठूलो कमज़ोरी हो। पूर्व संयोजक बिष्णु सुेवदी लगायतका साथीहरु पनि बिष्ट नेतृत्वको समितिको समय सकियो र यो समितिले गराउने अधिवशेनमा भाग लिदैनौ भन्दै आएका छन्। र एक पक्ष लार्इ न मनाइ कन अघिबेशन संभव पनि छैन। र आनन्द जीको नेतृत्वको समितिले हामी नै आधिकारिक हो भन्ने अडानमा रहने हो भने कसरी समाधान होला र ? कूनै पनि चिजको लिमिटेसन हुन्छ यो समितिको म्याद सिद्दीएको छ र म्याद सिद्दीए पछि पनि निर्वाचित समिति भन्दै यसलार्इ बर्तमान नेतृत्वले कति समयसम्म बन्धक बनाएर राख्ने हो।
यो नेतृत्वले जती राम्रो गरेका छौ भनेर रट लगाउने, हामीले नै निर्वाचन गराउछौ भने पनि र संंंस्थालाइ खल्तीको बनाउन खोजे पनि सबैलार्इ थाहा छ यो नेतृत्व कति अनपपुलर भएको छ। यो संस्थाको साख गिरेको छ। म आफै निर्वाचित केन्दीय सदस्य भएको र आज हामीले गरेका काम सस्थाको भएको बद्नामीले लज्जित हुनु परेको छ। हामीले आपसी सल्लाहा गरेनौ खाली यो संस्थालार्इ आफू माथी चढ्ने भरयाग बनायौ। हामीले संस्था बलियो बनाएनौ व्यक्ति बलियो बनायौ। संस्थामा अनुशासन क़ायम गर्न सकेनौ। गर्नु पर्ने ठोस् र उपलब्धि मूलक काम गर्न सकेनौ। जसको परिणाम आज संस्था घरासायी र बिघटनको सघारमा पुगेको छ।
हामीले अब अर्को निर्बाचनमा दुइ ठुला पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई हराउन मातृ पार्टी नेपाली काग्रेसलाई धेरै टेवा पुर्याउन सक्ने जनसम्पर्क समिति निर्माण गर्नु ज़रूरी छ । चुनाव हारेको यो ५ वर्षलार्इ सगठित् र एकता पूर्वक काम गरेर यसलार्इ उपलब्ध समयको रूपमा उपयोग गरेर काम गर्न सकेनौ भने हाम्रो संस्था मात्र होइन माउ पार्टीलाई पनि धेरै घाटा पर्नेछ । त्यसैले सबै साथीहरुले अब यो समयलाई जनसम्पर्क बलियो बनाउने संस्थाको रुपमा लिन आवश्यक छ।
आनन्द बिष्टजी आमन्त्रित केन्दीय सदस्य बनेको अवस्था, हाम्रो म्याद पनि सकिएको अवस्था छ र यसका लागि बर्तमान नेतृत्वले जन सम्पर्क समिति अमेरिकालार्इ निकास दिनु ज़रूरी छ । अव आफ्नो स्वार्थ सिद्दीका लागि संगठन लाइ बन्धक बनाएर राख्नु हुदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । यथा स्थितिमा यहॉ अधिवेशन हुने कूनै संभावना छैन्। ३९ तिर मुख फर्किएको यो म्याद सिद्दीएको समितीलाइ पुन : ब्यूताएर पनि अधिवेशन हुने संभावना छैन् । र साथीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा हो डा.सुरेन्द्र देवकोटाले पनि हिजो पार्टीले मान्यता दिदा दिदै पनि सबैलार्इ समेटेर जान सकिन्छ भने भनेर आफ्नो समितिलार्इ निर्वाचित समिति भनेर बन्धक बनाइ न राखेर २००९मा न्यू जर्सी वार्ता बाट आनन्द बिष्टले नेत्रित्व गरेको समिति र आफ्नो समितिलाई बिघटन गरी खग्रेन्द्र जिसीको नेतृत्त्वमा एकताको दोस्रो महाधिवेशन तयारी समितिको निर्माण भएको थियो। र त्यती खेर डा. देवकोटाको म्याद पनि सिद्दीएको थिएन र उनले मेरो समितिको म्याद छ भनेर बखेड़ा निकालेका थिएनन्।
उनले गरेको त्यों त्यागको इतिहासले मूल्याँकन अवश्य गर्ने छ। र त्यों एकता वार्ता गराउने , पहल गर्ने र सारा चाजो पाजो मिलाउने वेद प्रसाद खरेलजीले त्यों एकताको हस्ताक्षर सहितको सम्झौता सार्वजनिक गरेमा शायद सबैलार्इ त्याग गर्न प्रेरेणा मिलथ्यो की ?
यो अवस्थामा हामीले अब आपसी बिबाद भन्दा माथी उठेर केन्द्र समक्ष सबैको आवाज समेट्न सक्ने तदर्थ समितिको निर्माण र त्यसलाई निश्चीत समय तोकेर अधिवेशन गर्ने म्याद लिनलाई पहल गर्ने बेला आएको छ।
यदी यसो गरिएन भने जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको बिबाद समाधान होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अझै पनि हामीले यो संस्थालार्इ बलियों, एकीकृत र सगठित् बनाउनु ज़रूरी छ । सबै मिलेर तदर्थ समितीको निर्माण, तदर्थ समितीले तोकिएको समयमा सबै लाइ समेटेर निर्वाचन गराएर निर्वाचित समितीलाइ ज़िम्मेवारी हस्तान्तरण र निर्वाचित समितीले संगठन लाइ लिएर , एकीकृत र सगठित् बनाउनु ज़रूरी छ। आउनुस् सबैले त्याग गरौ र जनसम्पर्क समिती अमेरिकालाइ बचाउं । समय आउछ तर पर्खदैन । बगेको खोला फर्किदैन । मलाइ आशा छ सबै लाइ त्याग गर्न प्रेरेणा मिलथ्यो की ?
लेखक जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका निर्बतमान केन्द्रिय सदस्य तथा कानुन बिभाग प्रमुख हुन्।
यो लेख भूषालको निजी विचार हो । यसमा आधिकारिकता र जिम्मेवारी लेखकमै रहनेछ। - सम्पादक